यी हुन् एमालेमा मन्त्री बन्न पचास भन्दा बढि नेता सुची सहित – Setosurya
यी हुन् एमालेमा मन्त्री बन्न पचास भन्दा बढि नेता सुची सहित
काठमाडौ, ५ फागुन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएपछि मन्त्री बन्नका लागि एमाले सांसदहरुको दोडधुप तीब्र भएको छ। एमालेमा मन्त्री बन्नका लागि पचास भन्दा बढिले दावी गरेका छन्। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित गृहको दावी गरेका महासचिव ईश्वर पोखरेल समेत त्यसबाट बन्चित भएका छन् ।
पोखरेलले आफुलाई शुरुमानै उपप्रधानमन्त्री बनाउने आसा ओलीसंग गरेका थिए। तर शुक्रबार अचनाक लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मगर मन्त्री भएपछि पोखरेल छक्क परेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसपछि अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच भेटघाट समेत भएको छैन।
सरकारमा जाने भए महासचिव छोड्न समेत पोखरेलमाथि दवाव पर्दै आएको छ। ओलीलेपनि शीर्ष नेताहरुसंग मन्त्री बनाउने बिषयमा छलफल गरेका छैनन्। माओवादीसंग सहमति भएपछि मात्र उनले छलफल गर्ने निकट स्रोतले बतायो।
प्रदेशगत आधार लगायतलाई माप दण्ड बनाउदा धेरै नेताहरु मन्त्री बन्नबाट विमुख हुुने संभावना बढ्दै छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई अध्यक्ष ओलीले ताप्लेजुङमा गएर आमसभा मार्फत नै मन्त्री बनाउने घोषणा सार्वजनिक गरेका थिए। अहिले मन्त्री बन्ने दावी गर्नेमा उपाध्यक्ष भीम रावल ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल,प्रदिप ज्ञावली , गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत छन्।
दलित तर्फबाट मन्त्री बन्नका लागि छविलाल विश्वकर्मा र जगत विश्वकर्माको नामा चर्चामा आएको छ। छविलाल प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव जित्ने एक मात्र दलित हुन् । उनी यसअघि पनि मन्त्री भईसकेका छन। त्यसैले नयाँंले मौका पाउनु पर्छ भनेर समेत आवाज उठेको छ। त्यसैगरी मन्त्रीका दावेदारमा शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँंस्कोटा लगायत छन्। बाँंस्कोटा अध्यक्ष केपी ओलीका निकट मानिन्छन् ।
त्यसेैगरी मन्त्रीको दावेदारमा रविन्द्र अधिकारी, गणेश तिमिल्सिना र पद्या अर्याल छन। अर्याल प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव जित्ने एक मात्र महिला हुन्। त्यसैगरी अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि मन्त्रीको दावी गरेका छन्। ओखलढुंगा जस्तो कांग्रेसको किल्ला तोडेको भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउन दवाव बढेको छ। चुनावताका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओखलढुंगाको आमसभामा गएर सुनुवारलाई जिताए पठाए आफुले मन्त्री बनाई दिने भन्दै भाषण समेत गरेका थिए।
संसदिय दलको नेता चयन भएपछि केपी ओलीले सांसदहरुलाई दिए हालसम्मकै यस्तो कडा निर्देशन
प्रचण्ड पछिको उत्तराधिकारी बिना कि रेणु ?
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा ‘तीन बाम एक ठाम’
नेकपा म्याग्दीको नेतृत्वमा को ?
विराटनगरमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको धड्कन बढाउँदै भीम
सिंदुर लगाउने बेला पर्वतको माझफाँटका एक जोडी विवाह मण्डपबाटै पक्राउ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन् – बैशाख ३१ मै चुनाव हुन्छ, मिति सार्न सकिँदैन
मंशिर २१ पछि तीन तहमै वामपन्थी सत्ता ! यसरी हुंदैछ वाम सत्ताको शुरुआत :
मध्यरातमा नेपाली झण्डा सहित उर्लियो बिशाल जनसागर, भिडियो सहित